January 2014 | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံး ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Dhamma.apk လေးပါ
ဒီအထဲမှာ မေတ္တာပို့၊အမျှဝေ၊ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ၊ဓနသိဒ္ဓိဂါထာတော်၊ဓာရဏပရိတ်တော်၊ပရိတ်ကြီး-၁၁သုတ်၊ပဌာန်းတရားတော်၊ဂုဏ်တော်များ ပါဝင်တန်ဆာဆင်ပေးထားသည်။တော်ဝင်မင်းသားလေးက Logo ပုံလေးကိုစိတ်ကြိုက် ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးထားပါတယ်၊။
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Portable
Browserမှာ သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ Facebook Emailနှင့်Password တွေကို ဒါလေးနဲ့ ပြန်ရှာကြည့်လို့ရသဗျာ
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: နည်းပညာ ဗဟုသုတ, ဘလော့အလှဆင်ဖို့
ရေးသာရေးရမှာလိုင်းမကောင်းဘူးဗျာ ယခုလင့်သို့ သွား ပါ အသင်း ၀င်ပါ
၀င်ပြီးရင်မီနူးမှ မီးမီးစာမျက်နာကို ကလစ်ပါ
ကလစ်ပြီး ပါ က မိမိ စာမျက်နာ ကိုရောက်သွား ပါမယ်
ရောက်သွား ပါ က အောက်ပုံလေးအတိုင်း ရှိမယ် သိတင်တင်ဖို့
တွေ့ ရင် သီချင်းထည့်ရန်ကို နှိပ်ပါ
ရင် ကလစ်ပါ သိချင်းရှာခိုင်းမယ် ထည့်ပေလိုက်ပါ
ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ပုဒ်ထည်း ထည့် ထားတယ်
ပြီး ရင် အပေါ် ပုံတိုင်း UPLOAD လုပ်ပါ
ပြီးရင်နာမည်တွေ ဘာတွေမေး လာရင်ရေး ပေးပြီ
ဆေ့လိုက်ပါ နော် ဒါဆို ပလေယာတစ်ခု ရပါပြီ
မိမိစာမျက်နာကိုပြန်သွား ပါ ပြီးရင် သိချင်းနေရာမှာ
လေ ယာလေး ရောက်နေမယ် ဒါဆို HTML ကုဒ် ယူရအောင်
အပေါ်မှာတွေ့တဲ့တိုင်း (1) နှိပ် ပြီး ရင် (2) ကိုနှိ ပ်ဗျာ ကုဒ်တွေပေါ် လာမယ် ဒါဆို ရင်တော့ RightClick နဲ့ Copy ယူ ပြီ မိမိ ကြိုက်နှစ် သက်ရာဆိုက်မှာ ထည့် နိုင် ပါပြီ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်လုပ်လို့ အဆင်မပြေ ရင် ဒီမှာလုပ်ပြီသားလေး ယူမယ် အော်ငလေး (နည်းပညာ)
ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး ဆိုက်ဒ်ပြင်နေတာနဲ့ ဘာမှ တင်မပေးရသေးဘူးဖြစ်နေပါတယ် ဒီ apkလေးကို ကိုပြည့်ဖြိုးရဲ့ ဆိုက်ဒ်ကနေ တွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ် မူရင်းကို ရောက်ဖူးအောင် သွားလည်ရင်း မူရင်းဆိုဒ်ထဲက အတိုင်းပဲ ကူးယူတင်ပေးလိုက်တာပါဗျ...အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျ..
အားလုံးပဲ စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ..:P ။
ကျနော်သူငယ်ချင်းတို့ ကို Android Application တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ဆန်းဆန်းပြားပြားဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်..:) ကျနော်အတွက်တော့
နည်းနည်းထူးဆန်းနေပါတယ်။ကျနော် တစ်နေ့ပျင်းပျင်းနဲ့ Playstore မှာဝင်ကလိတော့
Internationel Calling Apk တစ်ခုကိုသွားတယ်တွေ့တယ်ဗျာ။
အဲတာနဲ့ ဖုန်းထဲ့ ထည့်ပြီး သိတဲ့ အတိုင်းပဲ Free Call ဆိုတော့ အနားမှာရှိတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးစမ်းပြီး
ခေါ်ကြည့်တယ်ဗျာ...:) ထင်တောင်မထားဘူး ဖုန်းဝင်သွားတာပေါ့။
ရနေပြန်ရော....:P ....အဲတော့ ကြိုက်သွားတယ်.....သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ ပြန်မျှဝေမယ်လို့
စိတ်ထဲ့မှာ တွေးထားလိုက်တယ်။ Internationel Call ဆိုတော့ ကျနော်မြန်မာပြည်ကို ထိုင်းကခေါ်ရင်လဲ
ရမှာပဲလို့တွေးမိတယ်....အဲတာနဲ့ မြန်မာပြည်က အမေ့အိမ်ကို ခေါ်ကြည့်တယ်....
မိမိရှိမှာတော့ Internat လိုင်းရှိနေရပါမယ်...ကိုယ့်ခေါ်မယ်ဖုန်းမှာတော့ အင်တာနက်လိုင်း ရှိဖို့မလိုပါဘူး။
လက်ရှိကျနောတင်ပေးတဲ့ Apk ကိုလဲ ထည့်ထားစရာမလို့ပါဘူး....နော်.
အမြဲတမ်းတော့ Free Call ရနေမှာမဟုတ်ပါဘူး...ကိုယ့်က အမြဲတမ်း Free Call အဖြစ်နဲ့သုံးချင်ရင်တော့
Application ရဲ့ အပေါ်ဆုံးက Free$ ဆိုတဲ့နေရာမှာ Facebook ကသူငယ်ချင်းတွေ Twitter ကသူငယ်ချင်းတွေ Gmail ထဲ့က ဘော်ဒါတွေကို Invite လုပ်ရပါမယ်...
အဲတာဆိုရင် တော့ OK တယ်ဗျာ...ဟီးး...ကျနော်တော့ ရှိရှိသမျှ အကောင့်တွေထဲ့ကသူငယ်ချင်းတွေကို
Invite လုပ်တယ်..။သူက Invite လုပ်လို့ တစ်ယောက် Confirm ပြန်လုပ်ရင် ပြား 50$ ပြန်ရမယ်.။
၂ ယောက်က Confirm ပြန်လုပ်ရင်တော့ 1$ ဒေါ်လာ အများကြီး လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ..
ဖုန်းအကြိုက်ပြော ဟီးးး....တစ်ပြားမှ ကုန်တော့ဘူး။
အိုင်ဖုန်း သုံးတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်လဲ အောက်မှာလင့်ပေးထားပါတယ်
စတင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Gmail အကောင့် တစ်ခု သို့ မဟုတ် အခြား Mail တစ်ခု
ခုရှိရပါမယ်။ Apk ကို ဖုန်းထဲ့ install လုပ်ပြီးတော့ ဖွင့်တဲ့ အခါကျရင် Register လုပ်ရပါမယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ Gmai အကောင့်တစ်ခုနဲ့ လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဗျာ..
Password ကိုတော့ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပေးပြီး မှတ်ထားပေါ့ဗျာ.။
အဲတာဆိုရင်တော့ ဖုန်း Free Call စခေါ်လို့ရပါပြီ။ ကျနော်တို့ Register လုပ်တော့ သူတို့က 1$ ဒေါလာပေးပါတယ်။ မိမိ Content လုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို သာမန်ဖုန်းခေါ်သလို့မျိုးပဲ
စခေါ်ကြည့်ပါ။Caller ID ကိုတော့ Off ပေးထားနော်.။
အောက်မှာ ကျနော် ဖုန်းစမ်းခေါ်ထားတာလေးကို Videos ရိုတ်ပြီးပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။
အဆင်မပြေရင်ပြောခဲ့ပါနော်...လက်တွေ့ စမ်းပြီးမှ တင်ပေးတာဖြစ်လို့ အဆင်မပြေရင်ကျနော်သိသလောက်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်။
For Android Free Calll Apk
>>>Download For Android<<<
Website တစ်ခုလုံးကို Download ဆွဲပြီး offline ကနေဖတ်ခြင်းတဲ့သူများအတွက် MetaProducts Offline Explorer Enterprise 6.4.3860 SR1 Full
http://buddhasetaman.net/ လိုမျိုးဆိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကို Downloadဆွဲထားချင်လို့
လိုက်ရှာရင်းကနေ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးတွေ့ရှိလာလို့ပြန်ပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်တာပါ..
အခု software ကိုအရင်ကတင်ပေးဖူးပါတယ်။ website တစ်ခုလုံးကို
download ဆွဲလိုရတဲ့ software ပါ Rss ကနေpost တွေကိုဖတ်တဲ့ဟမဟုတ်ပါဘူးး
download ဆွဲထားရင် တကယ်နဂို website ထဲဝင်ဖတ်ရသလိုပါ။
ဓါတ်ပုံ,စာသားတွေနဲvideo file တွေကို offline ကနေဖွင့်လိုရပါတယ်။
ဖုန်းတွေမှာ ဘယ်လောက်ပဲ File တွေဖျက်ဖျက် Memory FulL ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Memory Full-&-Android Assistant 6-1.0_70 လေးရှိသဗျာ
ဖုန်းတွေမှာ ဘယ်လောက်ပဲ File တွေဖျက်ဖျက် Memory FulL ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးတယ်လို့သိရပါတယ်
Andriod Version 2.3.6 တွေမှာတော့ မရဘူးနော်...
ကြားရခဲပါဘိ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ရှားပါတဲ့ lectures တင်ဆက်မှု
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ဓမ္မအသံ
ဒီည သီတဂူဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ရှားပါတဲ့ lectures ကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
အရမ်းကိုရှားပါးတဲ့ lectures ဖြစ်လို့ လူသားတိုင်း ဘာသာတိုင်း နားထောင်စေချင်ပါတယ် ဘာသာရေး ဘာသာတရားတွေရဲ့ အစ ဘာသာတရားတွေရဲ့ သဘောတရား များစွာ အသင်တို့သိသင့်တဲ့အချက်လက်တွေ အရင်ကနားလည်ထားတဲ့ ဘာသာတရားဆိုတာတွေ ဒီ lecturesတွေကိုနားထောင်လိုက်ရခြင်းအတွက် ထူးခြားလာမှုတစ်ခုတော့ရှိလာလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည့်မိပါသည်........ အောက်မှာလင့်ကလေးတွေပေးထားပါတယ်သွားရောက်ပြီးတော့ နာယူကြည်ညိုကြပါကုန်..........
Virus တွေဘယ်နေရာမှာခိုအောင်းနိုင်သလည်း ရှာကြည့်ချင်ကြမယ်
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Knowledge For Computer, Virusသတ်နည်း
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတိုင်း Virus အကိုက်မခံရဖူးသူရယ်လို့
မရှိပါဘူး။ ကြောက်စရာလည်းမလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် အချို့ကတော့
ပေ့ါဗျာ.. Anti-Virus ဆိုတာဗိုင်းရပ်တွေကိုသတ်ပေးဖို့လို့ပဲသတ်မှတ်
ထားကြလို့ပါ။ တစ်ကယ်တမ်းမှာက Anti-Virus တိုင်းက Virus တိုင်း
ကိုမသတ်ပေးပါဘူး။ အဆိုးဆုံးကတော့ Update မဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့..
အတွင်းပိုင်း System ဖိုင်တွေကိုပါ မှားယွင်းစွာဖြင့် Virus ပါဆိုပီးဖျက်
ပလိုက်တဲ့အဆင်ထိတွေဖြစ်ပီး Window Operation System ကြီးတစ်
ခုလုံးကမောက်ကမ ဖြစ်သွားတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်
ခု ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေက Software တွေဆိုရင် License Version
ကို ၀ယ်သုံးတဲ့လူရယ်လို့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လက်ချိုးရေလို့
ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အများစုက Crack File, Keygen File တွေနဲ့ပဲ
အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီလို Crack File တွေ Keygen File တွေကိုလည်း
Anti-Virus က Virus ပါဆိုပီးဖျက်လိုဖျက်နဲ့ အိုရှုပ်နေတာပဲ……အရှင်း
ဆုံးကတော့ ကျွန်တော် ဘယ် Anti-Virus ကိုမှ အထင်မကြီးလို့ ဘာ
Anti-Virus ကိုမှ မသုံးဘူး ၀င်လာမလား ကြိုက်တဲ့အကောင်လာ
Anti-Virus တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Microsoft Security Essential ဆိုလည်း
ဒီအတိုင်းပဲ Virus File အချို့ကို Pass လုပ်လိုက်တာမျိုးတွေ့ရတယ်။
ဒီတော့ Manual သတ်တဲ့နည်းတွေထဲကမှာအရင်ဆုံးသင့် Computer
ကို Virus တိုက်ရိုက်မ၀င်နိုင်အောင်တော့ အရင်ကာကွယ်ရပါမယ်။
မည်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်မဆိုသူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းနဲ့ အလုပ်မလုပ်ပါ။
သူ့အတွက် အလုပ်လုပ်အောင်ခိုင်းစေပေးသော autorun.inf ဆိုတဲ့ ဖိုင်
လေးနဲ့ တွဲပီးလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို Window Operation
System မှာ Auto Run ဖြစ်မယ့် Services ကိုတော့ပိတ်ထားဖို့လိုပါမယ်။
ဒီတော့ အရင်ဆုံး Run Box ထဲကနေ ‘gpedit.msc’ လို့ရိုက်ပါ။ ပီးသွားရင်တော့
အထက်ပါအတိုင်းComputer Configuration အောက်က Window Component ထဲကိုဝင်
ပီးညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ AutoPlay Policies ကို ၀င်လိုက်ပါ။ ပီးရင်တော့
အထက်ပါပုံအတိုင်းမှာ Turn off Autoplayကို နှစ်ချက်နှပ်ပီးထပ်ပေါ်လာမည့်
Box ထဲမှာ Enabled ကိုရွေး၊ All Drives ကိုရွေးပီး Apply/ OK လုပ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် User Configuration အောက်မှာလည်းအလားတူပဲလုပ်ဆောင်
လိုကပါ။ ပီးသွားရင်တော့ Run Box ထဲမှာ ‘gpupdate /force’ ဆိုပီးရိုက်လိုက်
ပါ။ ဒဆိုရင်တော့ Auto Play Services ကိုပိတ်ထားပီးပီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့
၁- C: (ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားအားရှာရန်)
၂- C:\_Windows (ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားအားရှာရန်)
၃- C:\_Windows\_System32 (ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားအားရှာရန်)
၄- C:\_MSOCache\_All Users
အကုန်လုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ။ ဒါတွေက %temp% ဖိုင်တွေပါ။
၆- C\_Recycle Bin
ဗိုင်းရပ်စ် အလွယ်ခိုအောင်းနိုင်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်
ဆိုရင် Virus Manual Killing အတွက် အစပိုင်းရလောက်မယ်လို့
ထင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းအလျင်းသင့်လျှင်သင့်သလိုမည်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်
အမျိုးအစားကိုမဆိုဘာ Anti-Virus မှာမသုံးပဲ Manual သတ်တဲ့နည်း
ဖုန်းထဲကနေ ကွန်ပြူတာအကြောင်းလေ့လာချင်သူများအတွက် Computer Dictionary (For Android)
မြန်မာတွေအတွက် ကိုရီးယားစကားပြော အသံထွက်ပါ(စာ) For Android
မြင်နေရတာလေးကတော့ သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အုပ်စုကလေးတွေအလိုက်ပါ အထဲမှာ စကားပြောလေးတွေပါပါတယ်ဗျ လိုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းသွားပါ..
Pattern Lock အား Root Access, USB Debugging မဖွင့် ထားပဲ ဘယ်လိုဖြုတ်မလည်း……
အရင်ဆုံး သင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားတဲ့ Zip ကိုဖြည်လိုက်ပါ အထဲမှာ ပါလာတဲ့ csm.zip နဲ့ delete_password.zip နှစ်ဖိုင်ကို သင့် ဖုန်း Memory Card အတွင်းသို့ထည့်လိုက်ပါ။
ထဲမှာ Default အတိုင်း Without Security ဖြစ်နေတာကိုပျော်ရွှင်စွာတွေ့မြင်ရမှာ
အာရှသားနည်းပညာ မှ ပြန်လည်ဖြည့်စွက် တင်ပြသည်
ဓာတ်ပုံတွေကို PDF ဖိုင်လေးလုပ်ပြီးတော့ သိမ်းထားချင်သူများအတွက် AnyPicJPGtoPDFConverter
Google Search မှာ ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ရှာချင်ရင်..
ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော်တို့ အများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့ Google Search Engine မှာ ကျနော်တို့ ရှာချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပိုမိုပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းလေး တစ်ခု မျှဝေချင်ပါတယ်။ သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်တော်အသုံးဝင်တာ တွေ့ ရပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးခင်ဗျာ။ ပထမဆုံး ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ စာလုံးတွေကို ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆိုပါတော့ .. အောက်က ပုံထဲကလို.. latest Myanmar News ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်.. News Links တွေတော့ အများကြီးတွေ့ရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်လို့ အဲဒီထက်ပြည့်စုံအောင်... ကိုယ်ရှာလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြပေးနိုင်အောင် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရှာလိုက်တဲ့ link ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ =&as_qdr=d စာသားလေး ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပိုရှင်းအောင် အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါအုံး...
ဒီပုံထဲကအတိုင်း အပြာရောင်နဲ့ ပြထားတဲ့နေရာမှာ =&as_qdr=d ဆိုတဲ့ word လေးထည့်ပေးလိုက်ပါ။
သဘောပေါက်ကြမှာပါ။ အခုလိုရှင်းပြရတာက မသိသေးတဲ့ သူများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သိပြီးသားသူများအတွက် ကလေးကလားဆန်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒီပုံကတော့ ပုံမှတ်အတိုင်း ရှာထားတဲ့ result ပါ။
ဒီပုံကတော့ အထက်ပါ စာလေး ထည့်ပြီး ပြန်ရှာလိုက်တဲ့ result ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးစမ်းကြည့်ကြပါအုံးခင်ဗျာ.. အဆုံးတိုင် ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံလေးတွေကို Mp3 သီချင်းလေးတွေနဲ့ Slide Show လုပ်ချင်သူများအတွက် PhotoDVDMaker Portable လေးဗျာ
ကျနော်ကိုယ်တိုင် Portable လေးပြန်လုပ်ကြည့်ထားတာပါ အဆင်ပြေမပြေသိချင်လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ Key တောင်းရင်တော့ အောက်မှာ ပြထားပါတယ် ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်။။။။
ကိုယ်တိုင်Portable လေးလုပ်ကြတဲ့အခါ အရည်သွေးပြည့်တဲ့ Icon လေးလုပ်ဖို့ IcoFXPortable လေးဗျာ
ဒီဆော့ဝဲလေးကို သုံးပြီး Android Application တွေကို အလွယ်တကူဖန်တီးရေးသားနိုင်ပါတယ်
ဘယ်လိုတွေ ရေးသားရမယ်ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာနေဆဲမို့
ပြန်လည်မျှဝေနိုင်တဲ့ အဆင့်မရောက်သေးတာ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် ..
ကဲ .. ဆော့ဝဲလေးကို လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ဒီမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်
ဒေါင်းပြီးရင် အထဲမှာ ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ပါပါတယ် ..
အရင်ဆုံး b4a full.exe ဖိုင်ကို Run ပြီး Install လုပ်ပေးပါ ..
Install လုပ်ပြီးတဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ အောက်ကပုံအတိုင်း ဖြစ်နေပါမယ် ..
Launch Basic4Android ရှေ့ကအမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်ပြီးမှ Finish ကို နှိပ်ပါ
Full Version ဖြစ်အောင် Crack ရဦးမှာမို့ပါ
ပြီးရင် Antivirus တွေကို ခဏပိတ်ထားပါ
b4a gen.exe ဆိုတဲ့ keygen ဖိုင်လေးကို C >> Program files >> Anywhere Software >> Basic4Android ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲကို အဆင့်ဆင့် ဖွင့်ဝင်ပြီး ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် ကူးထည့်လိုက်တဲ့ b4a gen.exe ဖိုင်ကို Run လိုက်ပါ
email ထည့်ရမယ့် အကွက်ထဲမှာ ထည့်ချင်တဲ့ email ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ ( တကယ်ရှိစရာမလိုပါဘူး)
ပြီးရင် Generate license file ကို နှိပ်ပေးလိုက်ရင် အောက်ကပုံအတိုင်း ပွင့်လာပါမယ် ..
OK ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ..
ပြီးရင် Desktop ပေါ်က Basic4Android program ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ..
တချို့စက်တွေမှာ email ထည့်ရမယ့် Box လေးတက်လာပါမယ် .. keygen တုန်းကထည့်ခဲ့တဲ့ email ကိုပဲ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရင် Full Version ဖြစ်သွားပါပြီ
တချို့စက်တွေတော့ ဘာ Box မှ တက်မလာပဲ Full Version ဖြစ်သွားပါတယ် ..
Help ဆိုတဲ့ထဲက About ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင် Registered Version ဆိုတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ..
အဲ .. တစ်ခု ဖြည်စွက်ပြီး ပြောချင်တာက B4A ကို သုံးပြီး Android Application တွေ ဖန်တီးရေးသားမယ်ဆိုရင် SDK ဆိုတာလေးလည်း
စက်ထဲမှာ Install လုပ်ထားမှ အဆင်ပြေပါတယ် ..
အဲဒီ SDK ကို Install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနေရာ ကို သွားလိုက်ပါ
Java Download ဆိုတဲ့နေရာကို နှိပ်ပါ
Accept Locense Agreement ရှေ့မှာ အမှတ်ကလေး ထည့်ပေးပြီး အောက်မှာ ကိုယ့်ဝင်းဒီးအမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး ဒေါင်းယူ Install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကဲ ... အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ
ညတုန်းက အိုင်တီမုဆိုးတင်ထားတာတွေ့လိုပါ သူ့ရဲံ ပို့စ်ကိုဘဲ PDF ဖိုင်လေးလုပ်ပြီးတော့ ပူးတွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကျနော်ကတော့ ဒီနေ အလုပ်ကလေးရှုပ်နာနဲ့ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးဗျ
လူကြီးမင်းကလေးတို့ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ မ,သွားကြပေတော့ဗျာ
Java SDK ဒေါင်းရန်
တားတားရဒေ့ါ ခုမှ စမ်းနေတုန်းချိတေးရယ် Window Repair ဆိုလို့ ဘော်ဘောတွေလဲ ပြင်ချင်ပြင်ရအောင်လို့တင်ပေးလိုက်တာ.၊။
Root မလုပ်ခင် ဖုန်းဆက်တင်းထဲက ပြုပြင်စရာလေးတွေ လုပ်ရပါမယ် အရင်ဆုံး Settings>>Applications>>Unknown sources ကိုအမှန်ခြစ်ပေးထားပါ အောက်ဆုံးနားမှာ Development>> USB debugging ကိုအမှန်ခြစ်ပေးထားရပါမယ် ပြီးရင်Phone ကို Power ပိတ် battery ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါ။ ၁၀စက္ကန့် လောက် ထားလိုက်ပါ။ ပြီရင်battery ကို ပြန်တပ်
VOL DOWN + POWER ကို ၁၀စက္ကန့်လောက်ကြာအောင် တွဲ နှိပ် ပါ။ Bootloader မှာရပ်နေ ပါလိမ်မယ် USB ကြိုးတပ်လိုက်ပါ၊Download ဆွဲထားတဲ့ Super Root.exe ဖိုင်လေကို Run လိုက်ပါ
ပြီးသွာလျှင် battery ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါ battery ကိုပြန်တပ်ပြီ VOL UP +POWER ကို
၁၀စက္ကန့်လောက်ကြာအောင်တွဲ နှိပ်ပါ။ Android အရုပ်လေးတက်လာပြီ ၅စက္ကန့် လောက်နေရင် Recover Mode တက်လာလိမ့်မယ် တက်လာရင် Recovery MODE မှ Reboot System Now ကို နှိပ်လိုက်ပါ Restart ကြပြီပြန်တတ်လာရင် Root လုပ်တာပြီဆုံးသွားပါပြီ။
Viber မှာ Call & SMS Block ဆိုတဲ့ Feature အသစ်များနဲ့ - Viber v4.2.0.1656 ( 23.1.2014)
Viber ဆိုတာကတော့ Android User တိုင်းသိထားပြီးသား Free Call Application တစ်မျိုးပါ။ အခု လည်း Viber ကနောက်ထပ် Version အသစ်ကို မနေ့ကထွက်လာပါပြီ။ အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Version မှာတော့ ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရလောက် ကို့ဆီကို မ၀င်စေချင်တဲ့ Contact နဲ့ Message တွေကို Block လုပ်ပေး နိုင်တဲ့ Feature တစ်ခုပါဝင်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဓါတ်ပုံ 10ပုံကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ပို့နိုင်လာပါပြီ။ Viber Incoming Call နဲ့ Message အသံတွေကိုပါ မိမိစိတ်ကြိုက်အသံပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါ့အပြင်အခြားသော Feature တွေလည်းပါဝင်လာတယ်လိုသိရပါတယ် ကျွန်တော်လည်း ရရချင်း ချက်ခြင်းတင်ပေးလိုက်တာ ဆိုတော့ အားလုံးတော့ မစမ်းရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက်လေးရှင်းပြပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။